Short Stories Archives - Page2of9- Safal Stories
Home Short Stories पृष्ठ 2
कथा : लार्कको प्वाँख
जंगल छेऊको बाटोमा एउटा लार्क चरो, आफ्नै धूनमा गीत गाउँदै थियो । यस्तैमा कीराहरुले भरिएको बाकस बोकेर, एउटा किसान त्यहीं आइपुग्यो । लार्कले किसानलाई...
बेलुन र दृष्टिकोण
सामान्यस्तरको एकजना व्यापारी, हाटहरुमा डुल्दै, बेलुन बेचेर जीविका चलाउँथ्यो । ऊसंग राता, पहेंला, नीला र काला सहित अनेकौं रङका बेलुनहरु थिए । ती खुब...
कथा : दृष्टिकोण
कुनै सहरमा एउटा धनी परिवार थियो । घरभित्र सम्पूर्ण सुविधा र बाहिर हिंड्नको लागि महँगो गाडी, रेष्टुराँ भएका कारण त्यस परिवारका छोरा-छोरी बाहिरि दुनियाँबाट...
कथा : आमालाई माया
आमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । स्कुल बिदाको दिन थियो । "आमा ! म तपाईंलाई माया गर्छु ।" बालक जोनले भन्यो । त्यसपछि आफ्नो कुरो...
जीवनको बग्गी तान्ने मेहनत
महान भायोलिनवादक फ्रिट्ज क्रिस्लरले एकपटक, आफ्नो एकल कार्यक्रम. प्रस्तुत गरे। कार्यक्रम सकिना साथ एकजना मान्छे, खुरुखुरु मंचमै चढ्यो । उसले भन्यो, " भायोलिन अति...
कथा : योग्य जीवन
एकजना बटुवाले नदीमा डुब्दै गरेको, अत्तालिएर चिच्याईरहेको केटो देख्यो । ऊ हामफालेर त्यहीं पुग्यो । र, डुब्दै गरेको केटोलाई किनारमा ल्यायो । कृतज्ञ बन्दै...
कथा : खरायो दौडाई
खरायो र कछुवाको कथा हामी सबैले सुनिरहेकै कथा हो । छिटो उफ्री उफ्री हिंड्ने खरायो र गह्रौं गरि ढिलो पाइला चाल्ने कछुवा दौडमा भाग...
कथा : प्रेरणा
एउटा परिवारका दुई दाजुभाइ थिए । एकजना लागुपदार्थ लिन्थ्यो, खराब कामहरु गर्थ्यो भने अर्को चाहिं समाजमा सम्मानित र सफल व्यापारीको रुपमा चिनिन्थ्यो । एकै...
असफलताले नगलेको आत्मविश्वास र लगनशीलताले मिलेको प्रतिफल
एरिआन्न हफिंगटन सफल अनलाइन पब्लिकेशनकी संस्थापक तथा कार्यकारी अधिकृत हुन् । तर यो सफलता चाख्नुभंदा अगाडी उनले जीवनमा अनेकौं हण्डर खाएकी छिन्। एरिआन्नको सफल दोस्रो...
स्टिभ जब्सको एउटा बानी, जसले उनलाई सफल बन्न मद्दत गर्यो
सफल मानिसहरु हामी जस्तै हुन् , तर सबै कुरा सामान्य तरिकाले नै गरिरहेका हुँदैनन् । सफल मानिसहरुको केही न केही फरक तरिका, बानी ,...
123...88 पृष्ठ 2